FIADANANA HO ANAREO! – filazantsaramada
FIADANANA HO ANAREO!
Publié parfilazantsaramada	 avril 20, 2015 Laisser un commentaire sur FIADANANA HO ANAREO!
« Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiki-tahotra izy, satria nataony fa nahita matoatoa izy Nefa hoy Jesosy taminy: nahoana no taitra hianareo? Ary nahoana no miahanahana ny fonareo? Izahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho no Izy; tsapao Aho, ka jereo, fa ny matoatoa tsy manana nofo sy taolana, tahaka izao ahitanareo Ahy izao. » Lioka 24:36-39
Maty ny Tompo ka nalevina. Nitsangana tamin’ny maty, tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina, ary dia niaraka tamin’ny mpianatra roa lahy ho any Emaosy, niseho tamin’ny mpianatra iraika ambin’ny folo lahy rehefa avy nitantaran’ireo roa lahy ho any Emaosy ny zava niseho taminy. Teo Jesosy, nitsangana teo afovoany, ary Jesosy nanonona hoe: Fiadanana ho anareo! Ny zavatra nanjo ireto mpianatra dia tebiteby sy tahotra satria Ilay mpiandry nianteherana dia novonoin’ny fahavalo, ary mbola tsy nahafantatra izy ireo fa nitsanagana tokoa ny Tompo. Diso fanantenana ny mpiantra satria ilay mpampianatra mpitarika azy ireo no maty, tsy ho hita intsony, ka na dia ny hisehoseho amin’ny olonkafa aza dia nahafeno tahotra, tsy fantatra na fahavalo izany na tsia; Ary ireto mpianatra nivory ireto dia mbola niafina. Te hampahery ireo mpianatra Jesosy, ary izany no nisehoany taminy. Nefa na ny fisehoana amin’ireto mpianatra aza dia mety hitarika tahotra indray ho azy ireo, ary dia izao nasainy notsapaina indray ny tanany sy ny tongony fa tena Jesosy, olombelona sy nofo io! Fantantsika fa ny antony nandefasana an’i Jesosy ho tonga nofo tety an-tany dia ny hamitrana ny fihavanana amin’ny olombelona sy Andriamanitra Ray Mpahary! Natao ho tonga nofo Jesosy mba ho foana ny elanelana misy eo amin’Andriamanitra sy ny olona mandray ny fampihavanana. Ny olona mandray ny fampihavanana nentin’i Kristy dia tonga zanak’Andriamanitra, iray tampo amin’i Kristy, tonga rahalahain’i Kristy, ary dia voalaza fa miara-mandova Aminy. Tsy nofo ihany anefa Jesosy fa fanahy koa, satria afaka manjavona, afaka miditra amin’ny trano mihidy. Sady tena olombelona Izy, no tena Andriamanitra! Koa na ny tahotra na ny tebiteby dia ho lasa, ary izany no hanononan’ny Tompo eto hoe: Fiadanana ho anareo!
Ny Tompo koa dia te hanonona ny Fiadanana ho antsika! Raha tena nandray ny fananganana ho zanaka marina isika dia ho tanteraka amintsika izany tso-drano lehibe izany: Fiadanana ho anareo! Andeha ary isika handini-tena marina na tena zanak’Andriamanitra marina isika na zanak’i Satana! Fa raha zanak’Andriamanitra marina isika dia, Fiadanana tokoa ho antsika. Amen!
Publié parfilazantsaramada avril 20, 2015 Publié dansUncategorized
RAHA TSY NATSANGANA TAMIN’NY MATY KRISTY !
Fiaraha-miombon’antoka: Fileovana Tanambao Manakara (FLM)/Feon’ny Filazantsara